कोरियामा आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न दबाब – Lokpati.com
अपराध सरकार अमेरिका नेकपा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल प्रहरी चितवन मृत्यु केपी शर्मा ओली पक्राउ प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेस राशिफल प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड
कोरियामा आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न दबाब
By लाेकपाटी न्यूज On १४ फाल्गुन २०७६, बुधबार १२:२९
काठमाडौं। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनले कोरोना भाइरस अन्तिम अवस्थामा रहेको बताएका छन्। कोरियामा कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म ५ जनाको निधन भइसकेको छ।
हाल ६ सय २ जना संक्रमणको शिकार भएको र १२ सय ७६ जनामा संक्रमणको आशंका गरिएको छ। हाल ८ हजार ५७ जनाको चेकजाँच भइरहेको पनि स्थानीय निकायले बताएको छ। कोरियाली विपक्षी दलले शनिबार नै सत्तारुढ पार्टीलाई आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न दबाब दिएका थिए।
अब कोरियाली सरकारले कोरोना भाइरसलाई प्रमूख प्राथमिकतामा राख्ने छ भने राज्यको सबै निकाय कोरोना भाइरसविरूद्धको अभियानमा सक्रिय हुनेछन्। सिओलस्थित क्वाङउन विश्वविधालयका प्राध्यापक डा. भानु श्रेष्ठका अनुसार निम्न तथा माध्यमिक विधालय एक साताका लागि बन्द गरिएको छ भने विश्वविद्यालय २ साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ।
कलेजहरुले अनलाइनबाटै अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन्। ‘कलेजमा पढ्न आउने भन्दा पनि छुट्टी लिएको खण्डमा गर्मीको छुट्टीमा त्यसको सोधभर्ना गर्ने भनिएको छ,’ डा. श्रेष्ठले भने। हाल कोरियामा ७० हजारको हाराहारीमा चिनियाँ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ५० प्रतिशत कोरियामै रहेपनि नयाँ सेमिस्टरका लागि आउँदो साता उनीहरू कोरिया फर्किने कुराले विश्वविद्यालयहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।
‘विश्वविधालयले छुट्टै ठाउँमा कोरेन्टाइन बनाएको छ। दुई साता उनीहरूलाई त्यहाँ राखेर मात्र बाहिर निस्किने छुट दिनेछ,’ उनले भने ‘अहिले विश्वविधालयले अनलाइनमार्फत् नभए छुट्टी लिन आग्रह गरिरहेका छन्। छुटेको पढाई गर्मीको छुट्टीमा गरिने भनिएको छ।’ सरकारले सर्वाधिक जम्मा हुने ठाउँमा नजान आफ्ना नागरिकलाई सुझाव दिएको छ।
सरकारी निर्णयपछि दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारहरु अन्यौलमा रहेका छन्। कोरियामा ८० हजार वैधानिक र १० हजार अवैधानिक गरी कूल ९० हजार नेपाली कामदार रहेको आशंका गरिएको छ। सरकारले गैरकानूनी रुपमा बसोबास गरेका विदेशी नागरिकलाई पनि शंका लागे स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल जान आव्हान गरिसकेको छ। उनीहरुको हकमा कुनै कानूनी मान्यता नखोजिने कोरियाको अध्यागमन विभागले जानकारी दिइसकेको छ।
युरोपेली देशद्वारा नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको घोषणा
माओवादबिना मार्क्सवाद पूर्ण हुन सक्दैन
कोरोनाबाट स्पेनकी राजकुमारी मारिया टेरेसाको मृत्यु
इटालीमा कोरोना भाइरसको उपचारमा संलग्न ५१ चिकित्सकको मृत्यु
चीन र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच टेलिफोन बार्ता